Home Wararka Sucuudiga oo Albaabada u laabay iskuulo laga leeyahay Turkiga
Sucuudiga oo Albaabada u laabay iskuulo laga leeyahay Turkiga
Sacuudi Carabiya ayaa waxay go’aansatay in ay xirto sideed iskuul oo Turkish ah dhamaadka sanad dugsiyeedka haatan socda, sida Arbacada maanta ah ay ku warantay wakaalada rasmiga ah ee Turkiga Anadolu.
Go’aanka ka careysiin doona xukuumadda Ankara ayaa dooneysa inay hagaajiso xiriirka ay la leedahay Riyadh kaasoo xumaa wixii ka dambeeyay dilkii safaaradda Sacuudiga ee Ankara loogu geystay wariye Jamal Khashoggi.
Mas’uuliyiinta Sacuudi Carabiya ayaa ku wargeliyay Wasaaradda Waxbarashada ee Turkiga in siddeeddan machad ay qasab tahay in ay albaabada u laabaan si joogto ah dhammaadka sannad dugsiyeedkan hadda socda.
Dugsiyadan waxaa wadar ahaan wax ka baran jiray 2,256 arday, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP oo soo xigatay warbixin kasoo baxdey Wasaaradda Waxbarashadda Turkiga.
Balse, wasaaradaha Arimaha Dibada iyo Waxbarshada Turkiga ayaan wali wax jawaab ah ka bixin go’aanka ay qaadatay boqortooyadda Sacuudiga oo qudheeda aanan fahfaahin sababta ay go’aankan u qaadaneyso.
Falanqeeyeyaasha ayaa rumeysan in go’aanka Sacuudiga uu noqon karo bar cusub oo uu ku xumaado cilaaqaadka labada waddan kuwaasoo bilooyinkii lasoo dhaafay muujiyey calaamado isu soo dhowaanshiyo ah.
Turkiga ayaa si weyn ugu gurmaday Qadar kadib markii ay xayiraadyo kusoo rogaadeen dalal uu Sacuudiga horkacayo kuna jirto Imaaraadka Carabta. Hasa ahaatee, xiisadaas ayaan wali si kama dambeys ah u soo dhamaan.